अस्थिर राजनीति उद्योग व्यवसायको बाधक – Rajdhani Daily
अस्थिर राजनीति उद्योग व्यवसायको बाधक
श्याम काबरा, सञ्चालक, काबरा ग्रुप
मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादन क्षेत्र बलियो हुनु आवश्यक छ । नेपालमा अस्थिर राजनीतिका कारण हुने बन्द, हडताल, महँगीलगायतका कुराले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र पनि उत्पादन क्षेत्र नै हो । डर र त्रासमा लगानीको सुरक्षा हुन नसक्ने बताउँछन्, उद्योगी श्याम काबरा । उनी एक दर्जनभन्दा बढी किसिमका खाद्य उत्पादन गर्दागर्दै आएको काबरा ग्रुपका सञ्चालक हुन् । काबरासँग उपभोग्य वस्तु र त्यसका विभिन्न पक्षसँग आधारित रही राजधानीले गरेको कुराकानीको संक्षेप :
० पछिल्लो समयमा मुलुकको समग्र औद्योगिक वातावरण कस्तो छ ?
– मुलुकको पछिल्लो समयको अस्थिर राजनीतिले निःसन्देह उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । कतिपय उद्योग व्यवसाय सदाका लागि बन्द गर्न बाध्य पारियो भने कतिपयले खोल्दै बन्द गर्दै त्रासमा उद्योग सञ्चालन गर्नुप¥यो । बन्द हडताल, नाकाबन्दी आदिले उद्योग व्यवसायलाई आर्थिक तथा व्यावसायिक रूपमा पु¥याएको अकल्पनीय क्षतिले मुलुककै आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हु“दा यसले आउ“दा केही वर्षसम्म समस्त अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारिरहनेछ भन्ने हाम्रो आकलन रहेको छ । तर पनि हामी परिस्थितिअनुरूप आपूmलाई ढाल्दै सम्झौता गर्दै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
० लगानीको वातावरण व्यावसायिक हितअनुकूल छ कि छैन ?
– अहिले पनि लगानीका लागि सानो ठूलो बाधा अड्चन भइ नै रहेको छ । बन्द हडताल तथा नाकाबन्दी आदिले कतिपयको लगानी डुबेको, उद्योग व्यवसायबाट पलायन भएको ज्वलन्त उदाहरणहरू रह“दारह“दै पनि आइपरेका समस्याहरूलाई पन्छाउ“दै समाधान गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेकाले धेरै विषयमा हामी सम्झौता गर्न बाध्य भयौं, ग¥यौं र उद्योग सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्दै गयौं । अहिले पनि श्रम क्षेत्रमा, विद्युत्, औद्योगिक नीति, वित्तीय क्षेत्रलगायत उद्योगलाई आवश्यक मुख्य तथा सहायक कच्चा पदार्थ आयात गर्दाको अवस्थामा भोग्नुपरिरहेको यावत् कठिनाइहरू आदिको गहिराइमा जाने हो भने धेरै चर्चा–परिचर्चा छलफल विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा लगानी डुबिहाल्ने अवस्था छैन । लगानी वातावरण व्यावसायिक हितअनुकूल नै छ ।
व्यावसायिक क्षेत्रका समस्याहरू अनगिन्ती छन् ।काबरा ग्रुप बिस्कुट, चकलेट, स्न्याक्स, प्याकेजिङ, आयात–निर्यात व्यवसायमा आबद्ध छ ।हाम्रा उत्पादनहरू मुलुकका सुगम दुर्गम विकट क्षेत्रहरूका गाउ“ टोलका पसलहरूबाट समेत उपलब्ध छन् ।काबरा ग्रुपको ‘क्वालिटी’ ब्रान्ड जनजनका जिब्रोमा स्वाद र गुणस्तरको पर्यायवाची भएको छ ।
० व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या के–के हुन् ?
– व्यावसायिक क्षेत्रका समस्याहरू अनगिन्ती छन् । यो र त्यो भनी औंल्याउ“दै जाने हो भने एउटा किताब नै तयार होला । तर पनि मुख्यतः विद्युत्, बाटोघाटो, यातायात, श्रम समस्या, दक्ष श्रमिकको अभाव, मुख्य तथा सहायक कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता, बेलाबेलामा राजनीतिक बन्द हडताल, छिमेकी मुलुकको अर्थनीतिको प्रभाव आदिले हाम्रा देशको उद्योग–व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ र यसको स्थायी समाधान हुनेमा सबैलाई शंका छ ।
० उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा सरकारी नीति कस्तो छ ?
– सरकारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, आवश्यकता आदिलाई ध्यानमा राखी तर्जुमा गरेको नीति समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा राम्रो छ । सोहीअनुरूप हामी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छौं । मेरो विचारमा सरकारी नीति निर्माण गर्दा उद्योग व्यवसायलाई सोबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल÷अनुकूल प्रभावको आँकलनपछि आवश्यकताअनुरूप निर्माण भए सोको कार्यान्वयन सफल तथा सहज हुने र जोकोहीलाई पनि ढुक्कसाथ नीति निर्देशनको परिधिभित्र रहेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार हुने थियो जस्तो लाग्छ । तर, यहा“ राजनीतिक हस्तक्षेप, वाद, राजनीतिक परिवर्तनले सरकारी नीतिमा हस्तक्षेप÷परिवर्तन हुने गर्छ ।
० काबरा ग्रुप के–के व्यवसायमा आबद्ध छ ?
– काबरा ग्रुप बिस्कुट, चकलेट, स्न्याक्स, प्याकेजिङ, आयात निर्यात व्यवसायमा आबद्ध छ ।
० यो समूहले उत्पादन गर्ने वस्तुको बजार हिस्सा कस्तो छ ?
– काबरा ग्रुपअन्तर्गतका उद्योगबाट उत्पादित ‘क्वालिटी’ ब्रान्डका उत्पादनहरूले ओगटेको बजार हिस्साको प्रतिशत ठ्याक्कै भन्न सकिएन, तर यतिचाहि“ भन्न सकिन्छ कि अन्य प्रतिस्पर्धीका ब्रान्डहरूको अपेक्षा ‘क्वालिटी’ ब्रान्डका उत्पादनहरूको बजार हिस्सा बढी छ र बढ्दै गइरहेको छ । झन् आगामी दिनमा लन्च हुन गइरहेको नया“–नया“ प्रोडक्टहरूले काबरा ग्रुपको बजार हिस्सा विस्तार गर्न अझ महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
० सामान्य व्यक्तिले अन्य कम्पनीको उत्पादन भन्दा यहा“हरूको उत्पादनलाई रोज्नुपर्ने के–कस्ता कारण छन् ?
– हाम्रो उत्पादन नै खोज्नु र रोज्नुमा स्वाद, गुणस्तर, तौल तथा आकर्षक प्याकिङ हो भन्ने मलाई लाग्छ । साथसाथै हरेक जिल्ला, नगर, गाउ“, टोल, गल्लीका पसलहरूबाट उपलब्ध हुने गरी स्थापित वितरण सञ्चालकको उचित व्यवस्थापनले समेत आम उपभोक्ता र हामीबीचको सम्बन्ध अझ नजिक भएकाले सबैको खोजाइ, रोजाइमा पर्न सफल भएका हौं ।
० आप्mना उत्पादनहरूको विदेश निर्यात गर्ने कुनै सोच छ कि ? यहा“हरूको भावी योजना के छ ?
– हाम्रा ‘क्वालिटी’ ब्रान्डका उत्पादनहरू स्वाद, गुणस्तर तथा प्याकिङमा मल्टिनेसनल उत्पादकको हाराहारी रहेकाले विदेश निर्यातको हाललाई सानो प्रयास गरिएको छ । देशकै प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्यात गर्ने भएकाले उत्पादनको गुणस्तर, स्वाद तथा प्याकिङमा विशेष ध्यान दिएका छौं । नमुनाका रूपमा सुरु गरेकोलाई भविष्यमा व्यापकता प्रदान गर्नेतर्पm अघि बढिरहेका छौं ।
० मुलुकको औद्योगिक ऐन व्यवसायमैत्री छ कि छैन ?
– सरकारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, वित्तीय, योजना आयोग, केन्द्रीय बैंक आदिस“ग समन्वयमा तर्जुमा गरेको औद्योगिक ऐन राम्रो नराम्रा पक्षबारे सम्बन्धित संघ÷संस्थाले बेलाबेलामा आप्mनो सहमति÷विमति सरकारका सम्बन्धित निकायमा राख्दै आएको नै छ । समय–समयमा संशोधन भइ नै रहेको हु“दा औद्योगिक नीति व्यवसायमैत्री रहेको हाम्रो ठहर छ ।
० यहा“हरूले उत्पादन गर्ने खाद्य पदार्थको गुणस्तर र मूल्य कस्तो छ ?
– काबरा ग्रुपअन्तर्गतका उद्योगबाट उत्पादित बिस्कुट, चकलेट, स्न्याक्स आदिको गुणस्तर नेपाल सरकार, खाद्य तथा गुणस्तर विभागबाट तोकिएको गुणस्तर मापदण्डअनुरूप रहेको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई सर्वोपरि राखी हामी हाम्रा उत्पादनहरू उपभोक्तामाझ पु¥याउन अघि विभिन्न गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र बजारमा पठाउ“दै आएका छौं । यसैगरी, बजारमूल्यको हकमा तौलबमोजिमको मूल्य कायम गर्ने गरेका छौं । उपभोक्ता बजार मूल्य र तौल विगत केही वर्षदेखि एउटै रहेको हाम्रो उत्पादनको स्तरीयता र गुणस्तर पनि एकै किसिमको रहेको छ । ‘क्वालिटी’ ब्रान्ड मुलुककै अग्रणी ब्रान्डमध्येको एक प्रतिष्ठित ब्रान्ड भएकाले स्तरीयतामा र गुणस्तरमा कहिले पनि सम्झौता गर्दैनौं ।
० यहा“हरूको उत्पादन मुलुकको कुन–कुन भागमा पुगेको छ ?
– हाम्रा उत्पादनहरू मुलुकका सुगम दुर्गम विकट क्षेत्रहरूका गाउ“ टोलका पसलहरूबाट समेत उपलब्ध हुने गरी वितरण व्यवस्था मिलाएका छौं । ताकि हाम्रा उत्पादनहरू सबै तह र तप्काहरूले उपभोग गर्न पाऊन् । खोजेको बेला हाम्रा स्तरीय—गुणस्तरीय स्वास्थ्यवद्र्धक उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सकून् ।
० यहा“हरूको उत्पादन खासगरी समाजको कुन वर्ग लक्षित छ ?
– सबै वर्ग अर्थात् केटाकेटी, युवायुवती, प्रौढ तथा वृद्धवृद्धाहरूका साथै हरेक तह र तप्काका उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गरेर सोहीअनुरूपका उत्पादनहरू बजारमा ल्याएका छौं । हाम्रा उत्पादनहरू निम्नस्तर–निम्नमध्यमस्तर, मध्यमस्तर–उच्चस्तर सबै वर्गले रुचाउने विभिन्न स्वाद तथा प्याकिङमा रहेको हु“दा सबैको पहिलो रोजाइमा रहेको छ ।
० उद्योग व्यवसायका अलावा अन्य कुन–कुन क्षेत्रमा आबद्धता छ ?
– हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायको विकास, संवद्र्धन तथा विस्तारमा लागेका छौं । क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरणतर्पm व्यस्ता रहेका हामी यो कार्य सम्पन्नपश्चात् मात्रै अन्य क्षेत्रमा हात हाल्ने विचार गरेका छौं । तत्काललाई उद्योग व्यवसायबाहेक अन्य क्षेत्रमा आबद्ध छैनौं ।
० सामाजिक क्रियाकलापमा यहा“हरूको योगदान के छ ?
– सामाजिक क्रियाकलापअन्तर्गत हामी विशेषतः शिक्षा क्षेत्रतर्पm आकर्षिक छौं । आजका विद्यार्थी देशका भविष्यका कर्णधार हुन् र उनीहरूको बौद्धिक तथा शैक्षिक विकासमा अलिकति भए पनि योगदान गर्न सकिन्छ कि भनेर विद्यार्थी भाइबहिनीहरूको बौद्धिक विकासलाई ध्यानमा राखी ‘टेस्टी टेस्टी क्विज कन्टेस्ट’ विगत २० वर्षदेखि र ‘टेस्टी टेस्टी मिस एसएलसी’ तीन वर्षदेखि सफलतापूर्वक आयोजना गरिरहेका छौं । र, यसपालि पनि गर्न गइरहेका छौं ।
हाम्रो ग्रुपले शिक्षास“ग सम्बन्धित संघ÷संस्थाहरूको सहयोगमा केही गरौं भन्ने सोचाइअन्तर्गत विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरूबारे छलफल गरिरहेको छ ।
० आप्mनो व्यवसायबाट कत्तिको सन्तुष्टि मिलेको छ ?
– मुलुककै अग्रणी ब्रान्डका रूपमा स्थापित र सबैको खोजाइ र रोजाइमा पहिलो स्थानमा रहेको ‘क्वालिटी’ ब्रान्डले प्राप्त गरेको सफलता काबरा ग्रुपका लागि ठूलो सम्पत्ति हो । यो सन्तुष्टिको विषय भए पनि हामी यतिकैमा सन्तुष्ट छैनौं, किनकि विकास पथमा अग्रसरले प्राप्त गरेको स्थानमा नै सन्तुष्ट भइदिए अझ अगाडिको पथमा रहेको स्थानमा अन्य कोही पुग्नेछन् । त्यसैले, प्रतिस्पर्धात्मक युगमा उद्योग व्यवसायलाई अझ उचाइमा पु¥याउन र कालान्तरसम्म शिखरमा स्थापित गरिरहन अन्त्यहीन विकास पथमा अघि बढि नै रहनुपर्छ र यसैलाई हामी अनुकरण पनि गरिरहेका छौं ।
० व्यवसाय विस्तारको योजना के छ ?
– व्यवसाय विस्तारअन्तर्गत केही नया“ उद्योगहरू थप्ने गृहकार्य भइरहेको छ र जसमध्ये तयारी चाउचाउ उद्योग निकट भविष्यमा नै सञ्चालनमा आउन लागेको छ । यसैगरी, प्याकेजिङ क्षेत्रमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्याकेजिङ उद्योग स्थापना गर्नेतर्पm छलफल चलिरहेको छ । साथै, ट्रेडिङतर्पm हाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त कम्पनीका उत्पादनहरू आयात गरी काबरा ग्रुपको बिक्री सञ्जालमार्पmत सफलतापूर्वक विक्री–वितरण गरिरहेका छौं र मुलुकको आवश्यकतानुसार उपभोक्ताको मागलाई ध्यानमा राखी नया“–नया“ स्तरीय, गुणस्तरीय तथा स्वास्थ्यवद्र्धक उत्पादनहरू आयात गर्नेतर्पm सम्बन्धित निर्यातकर्ता कम्पनीस“ग वार्तासमेत भइरहेको छ ।
० तपाईंले व्यवसाय गरेको क्षेत्रमा कतिको प्रतिस्पर्धा हुन्छ ?
– बिस्कुट, चकलेट तथा स्न्याक्सको बजारमा धेरै नै प्रतिस्पर्धा छ । तपाईंले देख्नु नै भएको छ कि बजारमा एउटै वस्तु विभिन्न उद्योगले विभिन्न नाम तथा प्याकिङमा बजारमा पु¥याएका छन् । कुन रोज्नु, कुन खानु, कुन असल र कुन कमसल भनेर आम उपभोक्ता असामञ्जस्यमा पर्दै आएका छन् । हाम्रो जस्तो उद्योग व्यवसायमा अझ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, ताकि उपभोक्ताको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरी आ–आफ्ना उत्पादनलाई अझ स्तरीयता, गुणस्तरीयतातर्पm विशेष ध्यान दिऊन् । यसबाट आम उपभोक्ता लाभान्वित हुन्छन् । निजलाई रोजाइको स्वतन्त्रता हुन्छ, रोजाइको विभिन्न विकल्प उपलब्ध हुन्छ । तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहि“ हुनुहु“दैन, यसले चाहि“ आपूmलगायत प्रतिस्पर्धी तथा आम उपभोक्तासमेतलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको कतिपय उदाहरणहरू बेला–बेलामा छापामा आउने गरेको छ ।
० काबरा ग्रुपको संक्षिप्त परिचय दिनुस् न ।
– सन् १९८५ मा एउटा बिस्कुट उद्योगबाट सुरु भएको काबरा ग्रुपअन्तर्गत हाल सातवटा उद्योग र तीनवटा ट्रेडिङ फर्म रहेका छन् । गणपतलाल काबराज्यूको संरक्षकत्वमा छोरा–भतिजाहरूको व्यवस्थापनमा सञ्चालित काबरा ग्रुपको ‘क्वालिटी’ ब्रान्ड जनजनका जिब्रोमा स्वाद र गुणस्तरको पर्यायवाची भएको छ ।
यो एक दिन वा एक महिना वा एक वर्षमा भएको होइन, लगातार ३१ वर्षदेखि आम उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखी उपभोक्ताको रोजाइ, खोजाइ तथा स्वादको पहिचान र सोबमोजिमको उत्पादनका कारण बिस्कुट, चकलेट तथा स्न्याक्सको बजारमा आज अग्रणी ब्रान्डका रूपमा उभिन सफल भएका छौं । हाम्रो उत्पादनमा विभिन्न स्वादका १ सय ७ भेराइटीका बिस्कुट, त्यसैगरी ८७ भेराइटीका चकलेट वेफर्सका साथै स्न्याक्स स्टिक्स, चिज रिङ, चिजबल्स, पोटेटो क्रेकर बजारमा सर्वत्र उपलब्ध रहेको छ भने तयारी चाउचाउ लिएर केही महिनाभित्रै बजारमा आउन लागेका छौं ।
० अन्त्यमा यहा“लाई केही भन्नु छ ?
– अन्त्यमा, उद्योग व्यवसायमैत्री औद्योगिक ऐन, सरकारी नीति तर्जुमा गर्दै उद्योग व्यवसायलाई एकद्वार प्रणालीबाट कुनै पनि सरकारी कार्य गर्ने सुविधा, निर्यातका लागि प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान, आयातमा सुविधा आदिको व्यवस्थाले आम उपभोक्तालगायत विदेशमा निर्यात गर्न सकी विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत केही योगदान पुग्ने देखिन्छ । यसैगरी, श्रमक्षेत्रमा समेत रोजगारी सिर्जना हुन गई युवाहरू विदेश पलायन हुनबाट रोकिन्छ ।
संसद् बाहिरका दलको आवाज सुन्नुपर्छ
आर्थिक विसंगति झाँगिएको छ
कविले मालिक स्वीकार गर्दैन